Allgedo.com » 2011 » April » 19
Home » Archive Daily April 19th, 2011 Ciidanka Dowladda KMG ah oo Dib u gurasho ka sameeyay Ceel-Waaq iyo Gedo oo si siman ugu qeybsantay Dhinacyada dagaalamaya (Warbixin). Apr 19, 2011 Xiisada dagaal ayaa laga soo sheegayaa degmooyin ka tirsan Gobolka Gedo saacado kadib markii uu Gedo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka G/dhigga Dowlada KMG ah.
Ciidamo farabadan oo ka tirsanaa dowladda KMG ah oo xalay saqdii dhexe gaaray meel 15 KM u jirta tuulada Buursaar ayaa galabta dib ugu soo laabtay Ceel-Waaq iyagoo aan wax dagaal ah la gelin xoogaga Al Shabaab ee Buursaar ku sugan.
Dad ku... Rabbi ha’u naxariistee waxaa saaka ku geeriyooday magaalada Nairobi Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdulaahi Aw-Cali (Buugga Tacsida booqo) Apr 19, 2011 Inaa Lilaahi wa Inaa Ilaahi raajicuun. Waxaa saaka oo ay taariikhdu tahay April 18, 2011 magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku geeriyooday Rabbi ha u naxariistee marxuum Sheekh Mohamud Sheekh Cabdulaahi Aw-cali.
Fadlan Riix Link-igaan si aad u booqato buugga Tacsida uguna duceyso Sheekha
Sheekha oo ahaa nin caalim ah, qeyrka iyo nabaddana si weyn ugu ololeyn... Alle ha’u naxariisto Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdulaahi Aw-cali oo maanta ku dhintay magaalada Nairobi ee dalka Kenya (Akhri tacsida oo dhan) Apr 19, 2011 Anagoo ka tiiraan yaysan Geeridii Naxdinta lahayd ee ku timid marxuun Nabadoon Sh. Mohamuud Sh. Abdulaahi Cali oo ku geeriyooday Tariikhdu markay ahayd April 18, 2011 Magaalada Nayrobi ee wadanka Kenya, ayaa waxaan halkaan tacsi ugu direynaa qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed ee uu marxuumka ka tagay.
Fadlan Gujji Link-igaan si aad u booqato buugga Tacsida... Fiqi: Gaajo iyo oon xun ayaa ka jira gobolka Gedo. Apr 19, 2011 Raiisul wasaare ku xigeenka dowladda KMG ah ee Soomaaliya, ahna Wasiirka Gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqday magaalada Luuq Ganaane oo ah goobaha dhawaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna ay ka qabsadeen al-Shabaab.
Haddaba wasiirka oo isagoo jooga magaalada Beled Xaawo BBC u warramay ayaa waxa uu sheegay in xaalad bini’aadanimo... Isagoo Boorsadiisa Hodonka ah adeegsanaya ayuu iska Hor leexiyay Caqabadihii hortaagnaa, Shariif Xasan Sheekh Aadan, RW Farmaajo iyo Shariifka halkee ku dambeyn doonaan (Warbixin). Apr 19, 2011 Siyaasiga ku caan baxay kala furfuridda isbahaysiyada siyaasadiisa kasoo horjeeda ee shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku guuleystay in uu iska hor leexiyo mucaaradad ka dhan ahaa Kurisgiisa.
Kadib kulamo is daba joog ah oo xalay ilaa iyo maanta ka socday magaalada Muqdisho ayuu Shariif Xasan oo adeegsanaya Jeebkiisa hodonka ah ku guuleystay in uu kala furfuro Xildhibaano mucaaradsanaa oo ay soo abaabuleen... Faroole oo ka hadlay Kooxahii Weeraray Masaajidada iyo adkeynta amaanka Puntland. Apr 19, 2011 Madaxweynaha maamul Goboleedka Puntland C/raxmaan Faroole ayaa cambaareeyay qaraxyadii iyo weerarkii argagaxa lahaa ee lagu qaaday masaajidda ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkkaasi Mudug.
Faroole oo maanta dib ugu soo laabatay Magaalada Garoowe kadib markii uu kasoo qeyb galay shirkii ay Qaramada Midoobay soo qaban qaabisay ee ka dhacay Nairobi ayaa ka warbixiyay kulankaasi iyo waxyaabihii... AMISOM oo dad shacab ah ku dishay Muqdisho. Apr 19, 2011 Ciidamada AMISOM ayaa maanta Rasaaseeyay dad shacab ah oo doonayay inay isticmaalaan wadada Dabka kadib markii shalay ay Dowladu shaacisay inay furtay Wadadaasi.
Sida ay warbaahinta u sheegeen goobjoogayaal tiro dad rayid ah oo saakay doonayay in ay ku lugeyaan wadada Dabka ayaa waxaa rasaas huwiyay Ciidadmada AMISOM ee fariisinka ku leh wadada Dabka oo kamid aheyd wadooyinka ku xirmay dagaalada Bilihii... Barnaamij cusub oo xiisa leh looguna magac daray “Dhalinta iyo Maanta” oo ay daadihinayaan wariyeyaal iskaashaday halkaan ka dhageyso Apr 19, 2011 Barnaamijkan Dhalinta iyo Maanta ayaa ah Barnaamij ay idiin soo diyaariyeen koox Wariyaal isu tagay ah, kuwaas oo ka damqaday xaaladda kasii daraysa ee ay maanta ku sugan yihiin dhalinta Soomaaliyeed.
Barnaamijkan oo wareysi cod ah ayaa waxaad ku maqli doontaa qodobo muhiim ah oo muujinaya Wadaniyadnimo, kuwaasoo ay ka mid yihiin dagaalada bilaa macnaha ah ee dalkeena ka socda muddada dheer, isticmaalka... Ciidamada Puntland oo Howlgallo adag ka wada Mudug. Apr 19, 2011 Ciidamada PIS-ta iyo kuwa Booliiska maamul goboleedka Puntland ayaa wali magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo ka wada qab qabashada dhalinyarada iyo culumada ku nool xaafadaha hoostaga deegaanada uu gacanta ku hayaan Puntlnad.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa xaqiijinaya in ciidamda ay kaxeysteen dad ganacsato caan ka ahaa magaalada Gaalkacyo iyagoo sidoo kale weeraray goobo shaqo ay ka howlgali jireen... Golaha Wasiirada Dowladda KMG ah oo maanta uu shirkooda kasoo baxay qodobo muhiim ah oo ay ugu horeyso in ay Soomaalida isku tashato Apr 19, 2011 Muqdisho, Somalia (AOL) – Shir ay maanta Golaha Wasiiradu yeesheen oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii shacabka soomaaliyeed ay isagu tashan lahaayeen iyo marxaladda kala guurka ah.
Golahu markey qiimeeyeen marxaladda dalka, horumarka laga sameeyey dhinacyo badan iyo sida loogu... Radio Allgedo/ Waraysiyo